राेचक संसार Archives - Page2of 19 - krishipost.com
जापानीज प्रविधिबाट फोहोर व्यवस्थापन गरी कम्पोष्ट मल बनाउने केन्द्र उद्घाटन
भक्तपुर । प्रदेश नं ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आज मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले उत्पादन गरेको जापानीज प्रविधिबाट फोहोर व्यवस्थापन गरी कम्पोष्ट मल बनाउने केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभएको छ । मध्यपुरथिमि वडा नं ४ विष्णु कुण्डलमा निर्माण भएको केन्द्रको आइतबार उहाँले उद्घाटन गर्दै यसलाई नमूनाको रुपमा विकास...
नेपालीलाई लाग्छ ‘अचम्म’आखिर किन गाईको पेटमा प्वाल पार्छन् अमेरिकी किसान ?
काठमाडौं । अमेरिकी किसानहरुले यसरी निकै डरलाग्दो गरी गाईको पेटमा प्वाल पार्ने गर्दछन । किन यसरी पसुलई दुख दिएका होलान यी अमेरिकनले भनेर बुझ्दै जाँदा यो त नयाँ र अचम्मको प्रविधि पो रहेछ । यसो गर्नुको कारण पनि बडो आस्चर्यलाग्दो नै छ। यो अनौठो...
एजेन्सी । टर्कीमा एक किसानले गाईलाई ‘भर्चुअल रियालिटी’ अर्थात भीआर चस्मा लगाएर हरियाली चौरमा चरिरहेको आभास गराए र नतिजा स्वरुप खुसी भएर गाईले धेरै दूध उत्पादन गरेको किसान इजेट कोखक बताउँछन् । रमणीय दृश्यले गाईलाई आरामदायी र खुसी बनाउँदा दूध पनि बढी दिने यसअघि...
कृषि सिकाउन युवालाई दक्षिण कोरिया पठाइने, तलब एक लाख ८० हजार
कंचनपुर । कञ्चनपुरको जेठो भीदत्त नगरपालिकाले कृषिमा आधुनिक र वैज्ञानिक प्रविधि भित्र्याउन स्थानीय युवालाई दक्षिण कोरिया पठाउने भएको छ । नगर कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरी सम्झौतापत्र इन्टरनेशनल अर्वन ट्रेनिङ सेन्टर, ग्याङ्गवन प्रदेशलाई पठाएइको भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बताउनुभयो । नगरपालिकाले मौसमी कृषि श्रमिकलाई...
फेरी वर्डफ्लुको खतरा आउँदै, १० हजार सारस संक्रमित
एजेन्सी । मानिसलाई दुख दिने पनि अनेक रोग हुन्छन् । कोभिडको समस्यावाट पार पाउन नपाउँदै फेरी ठूलो संख्यामा वर्डफ्लु संक्रमित चरा भएको पुष्टि चिकित्सकहरुले गरेका छन् । उत्तरी इजरायलको एउटा आरक्षण क्षेत्रमा बर्डफ्लुबाट दुई हजार भन्दाबढी सारस मरेका छन् । बर्डफ्लुबाट अन्य १० हजार...
बट्टाईको अण्डा खानाले बालबालिकामा आउछ यस्तो नसोचेको परिवर्तन !
काठमाडौं । नेपालमा बट्टाई पालन निकै फस्टाएको छ। बट्टाईको अन्डा र मासुलाई पौष्टिक खाद्य पदार्थ मानिन्छ ।यसको मासुभन्दा पनि अन्डा निकै स्वास्थ्यबर्धक हुने विज्ञहरुको भनाइ छ। बट्टाईको अन्डा स्वास्थ्यका हिसाबले बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई फाइदाजनक खुराक मानिन्छ ।नेपालमा पाँच प्रजातिका बट्टाई पाइन्छन्। तीमध्ये ‘कमन क्वेल’ बट्टाई...
शरीरलाई फाइदा जनक तरकारी स्कुस कस्तो फाइदा छ हेर्नुस !
काठमाडौँ : नेपालीको भान्सा धान्ने सब्जी, स्कुस । घर–आँगनमा सजिलै फल्ने । धेरै फल्ने । स’स्तो, स्वादिलो, सुपा’च्य र स्व’स्थ्यकर । स्कुस वहुउपयोगी तर’कारी । स्कुसको मु’न्टा, फल र जरा सबै स्वाद फेर्दै खान सकिन्छ । त्यससँगै स्कुस धेरै मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले यसले...
बंगलादेशमा भेटियो सबैभन्दा सानो गाई, एकाएक बन्यो भाइरल !
एजेन्सी । बंगलादेशमा अनौठो सानो गाई फेला परेपछि हेर्न आउनेहरुको भीड लागेको छ । बंगलादेशको चरिग्रामस्थित एक फार्ममा भेटिएको उक्त गाई २१ सेन्टिमिटरको रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी उक्त गाईको तौल २८ केजी रहेको छ । २३ वर्ष पुगेको गाईको त्यतिको उचाइ र तौलले...
नेपाली ‘कोदोको ब्राण्ड रक्सी’ मूल्य सुन्दा तीनछक !
काठमाडौं । बेलायतमा नेपाली कोदोबाट उत्पादित रक्सी बजारमा बिक्री बितरण सुरु गरिने भएको छ । नेपालमा परम्परागत रूपमा पिउँदै आएको कोदोको रक्सी ब्रान्ड बनाउन शुरू गरिएको छ । बेलायतमा कोदो लिमिडेट कम्पनीको स्थापना गरी नेपालीहरुले कोदोको रक्सीको ब्राण्डिङ शुरू गरेका हुन् । उक्त रक्सीको...
एजेन्सी । झट्ट सुन्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्छ । अचम्म नलागोस् पनि कसरी वनस्पतीबाट मासु फल्छ भन्दा । तर, सत्य सावित हुँदैछ, जौबाट नै मासु उत्पादन हुने र पशुवध गर्न नपर्ने । हो, आइसल्यान्डमा वैज्ञानिकहरूले एक प्रकारको कोषबाटै यो अचम्म लाग्ने कुरालाई सावित गर्दैछन्...
« अघिल्ला 1234… 19 पछिल्ला »